AMAZA E-NEON ABENGEZELAYO ABUYILE KUNXWEME LWASECALIFORNIA - KWAYE LO MFOTI UXAKEKE KAKHULU NGOKUWAFUMANA - IINDABA
Amaza e-neon abengezelayo abuyile kunxweme lwaseCalifornia - kwaye lo mfoti uxakeke kakhulu ngokuwafumana
UPatrick Coyne uphume ubuncinci amaxesha angama-50 kulo nyaka ukuzama ukubhala i-bioluminescence kwaye ufumene amanqaku kwezi ntsuku zidlulileyo njengoko ebonakala kunxweme lwaseCalifornia.
Ngelixa uleleyo, amaza olwandle ayekhanya kwakhona ngokuqhushumba kweneon yombane eyayikhanyisa iilwandle ezimnyama.
Ukuleqa amaza akhazimlayo kuye kwaba yinto esondele kuPatrick Coyne, umfoti weTorrance oye wahlola ulwandle ngeziganeko zebhayoluminescence eqaqambileyo kangangezihlandlo ezingama-50 kulo nyaka, ukusuka eMalibu ukuya eSan Clemente.
Ngamanye amaxesha, ulwandle luhlala lumnyama, kwaye ukuphuma kuba yi-bust. Ngobunye ubusuku, amaza alula kwaye athathe i-hue ekhanyayo, enika ithemba kuya kubakho ukusebenza okubekwe nguMama weNdalo.
Kwaye obunye ubusuku buyamangalisa njengoko amaza ebetha kwaye eqhuma kumboniso wokukhanya we-neon, kubandakanya nobusuku obudlulileyo eCrystal Cove naseCrescent Bay eLaguna Beach, apho uCoyne efumene amanqaku eyona mifanekiso ibalaseleyo kunye neevidiyo ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka.
Iposti ekwabelwana ngayo nguPatrick Coyne (@patrickc_la)
Sifikelele kwisigqibo, yenzeka rhoqo kunokuba sicinga, utshilo. Kuba besijonga yonke enye iveki, singayenza loo ngcinga ngoku. Kodwa konke kunokuxhomekeka kwimeko kunye nemozulu.
Njengeentyantyambo ze-phytoplankton ezibangela ukuba ulwandle lukhazimle, i-Coyne's drive yokufota iziganeko ze-bioluminescence ikhulile. Uqale wafumana umbono we-bioluminescence bloom ngo-2018 kwaye kwakhona ngo-2019 eMalibu, hayi iminyhadala eyomeleleyo kodwa ngokwaneleyo ukumenza afune ukwazi ngale nto ingaqondakaliyo.
Ke ngo-2020, kanye njengokuba ubhubhani we-coronavirus wabetha kwaye umhlaba wawufuna into yokumangaliswa, UCoyne kunye nabanye abafoti ababini, uMark Girardeau kunye noRoyce Hutain, bathatha imifanekiso kunye nevidiyo ye-bioluminescence eyenzekayo kwi-Newport Beach's. unxweme oluye lwentsholongwane.
Ngaloo ntyatyambo inamandla ye-bioluminescent phytoplankton, eyathatha phantse iinyanga ezimbini, uCoyne wakwazi ukubamba amaxesha amangalisayo, yonke into esuka kwi-neon blue dolphin idlala ecaleni kwephenyane leNewport Coastal Adventure, ukuya kwiividiyo ezingenakubalwa ezibonisa iinzwane zakhe zikhaba isanti ekhazimlayo ngokungathi bekuyiyo. zapped ngomlingo.
Waqubha kuyo, wayifaka ezibhotileni ukuze uyishukumise, imangalisiwe ngokumangalisayo.
Ke xa weva ukuba iyavela kwakhona ekuqaleni kwalo nyaka, uCoyne kwafuneka aphinde abhale imbonakalo yayo.
Uqikelelwa ukuba uphume kangangezihlandlo ezingama-50 ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, ijaunt nganye ithatha iiyure ezine ukuya kwezintlanu, yenza iiyure ezingama-200 ubuncinci azichithe kuleqa ukukhanya. Oko akuthethi ukubala amakhulu eeyure azibeke kunyaka ophelileyo.
Kwaye ukuba isiganeko se-bioluminescence sinamandla, uya kuhlala ixesha elide, ukufumana ii-angles ezintsha zokudubula ividiyo kunye nemifanekiso.
Xa ujonge kumanzi aluhlaza akhazimlayo, awasoze aguge, utshilo uCoyne. Ixesha lihamba ngokukhawuleza, uyalibala ukuba ulapho iiyure ekupheleni. Kumnandi ukuzama imifanekiso eyahlukeneyo. Ndiye ndakwazi ukuyibamba kakhulu kulo nyaka unesiqingatha. Ukuzama izinto ezintsha, ii-engile ezintsha, imifanekiso kunye nevidiyo kuyonwabisa kakhulu.
Ukumjoyina kuhambo lwakutsha nje ngumfoti uJosh Gravley, athe wadibana naye kulo nyaka uphelileyo ngelixa ekhupha i-bio, njengoko eyibiza ngokufutshane. Bayibetha kwaye ngoku uGravley, ohlala eNewport Beach, ujonga kwakhona ukuba ulwandle lunomhlwa na emini - amaza abomvu angabonisa ukuba ulwandle luyavutha ebusuku.
Kukho abantu abaninzi uCoyne adibene nabo kuhambo lwakhe lobusuku. Abanye balandela imidiya yakhe yentlalo ukuze babone xa ethumela iividiyo ezibukhoma kwaye bangxamele ukuyibona kuqala. Omnye umfana wade wafuna ifoto naye ngobunye ubusuku obutsha nje.
Ngoku ndaziwa njengomfana webioluminescence, utshilo uCoyne ehleka.
Inkampani yaseFlorida, Vuka kwaye Uhambe Kayaking, yafumana umsebenzi kaCoyne kwaye kwinyanga edluleyo yamkhupha ngenqwelomoya ukuya kuthatha umfanekiso we-bioluminescence eyenzekayo kwiSiqithi saseMerritt, umtsalane wabakhenkethi ukusuka ngoSeptemba ukuya ku-Okthobha. UGravley noGirardeau bazimanya nabo.
Baqubha kuyo, babheqa kuyo kwaye babukela amahlengesi, iingwenya kunye neemanatee zikhanya emanzini ombane.
Saba nexesha elimangalisayo, utshilo uCoyne. Kwakumnyama kakhulu apho kwaye yayiyindawo enkulu kwaye igxile.
Uye wakwazi nokwenza umsebenzi osecaleni ngokuthengisa imifanekiso yakhe.
UCoyne, osebenzela iApple njengomsebenzi wakhe wosuku, uthe akwaziwa oko kumgcina ephindela phandle ebusuku ukuze afumane okungakumbi.
Kukho isixa esinesidima esaziwayo malunga ne-bioluminescence, kodwa akukho nto ingako eyaziwayo, utshilo. Ngokuphuma nje kangangoko sinako, siye saqaphela iipateni kunye nezinto ekufuneka sizijonge.
Ukuba amaza antlitheka kanye esantini, umzekelo, ukukhanya akunamandla kangako. Kodwa xa amaza ebuya umva, emanzini, kulapho ufumana khona olona luhlaza luqaqambileyo, utshilo. Okukhona ulwandle lumnyama, kokukhona lungcono, kodwa ukukhanya okujikeleze umgama kwenza imifanekiso eqaqambileyo.
Umfaki-zithombe uPatrick Coyne, waseTorrance, uye waphuma ehlola i-bioluminescence elunxwemeni, kunye namaza avuthayo abonisa kwi-Crystal Cove State Beach kunye neCrescent Bay eLaguna Beach kwiintsuku zamva nje. (Ifoto ngoncedo lukaPatrick Coyne/@patrickc_la)
ENewport Harbour, ukuzola kungcono. Xa kunomoya, akubonakali ngathi kunamandla. Ngelixa ukukhanya kulo nyaka uphelileyo kubonakale ubusuku obuninzi ukutshona kwelanga, ngeli xesha kubonakala ngathi kusondele ezinzulwini zobusuku, ngamanye amaxesha kamva, utshilo.
Izazinzulu zineethiyori zazo zokuba kutheni le nto ibonakala kangaka kulo nyaka.
I-organism evelisa i-bioluminescence yonxweme apha, kubandakanywa namaza abomvu, yi-dinoflagellate Lingulodinium polyedra, eye yaxhaphaka kulo nyaka, kungekhona ngokungalindelekanga emva kwe-red tide emangalisayo kunyaka ophelileyo, uMichael Latz, ingcali kwi-Scripps Institution of Oceanography e-UC San Diego. , wabhala kwi-imeyile.
Nangona asiziqondi zonke izinto ezibangela ubuninzi bayo, sikholelwa ukuba ihambelana nokunyuka, okwenzekayo xa imimoya ikhupha i-nutrient, amanzi anzulu ukukhuthaza ukukhula kwe-phytoplankton, wathi. Ukuphumla kwiimeko zokunyusa kucingelwa ukuba yenye yezinto ezikhuthaza ukukhula kweLingulodinium.
UTom Morey, umyili weBhodi yeBoogie, usweleke eneminyaka engama-86
Ukuchitheka kweoyile yaseCalifornia kusenokwenzeka ukuba yi-106,000 yeegaloni ezincinci kunoqikelelo lwangaphambili
Ukuchitheka kweoyile yaseCalifornia ibinokuba malunga neelitha ezingama-25,000, amagosa onogada baseNxwemeni athi ngoLwesine
Emva kokuchitheka kweoyile, ulwandle ngalunye oluchaphazelekileyo lwaseMazantsi eCalifornia luphinda luvuleke kusetyenziswa imigangatho yalo
Ukuchitheka kweoyile yaseMazantsi eCalifornia ngoku kuphandwa liSebe lezoBulungisa likarhulumente
Kwaye njengemisinga yolwandle, yonke inokutshintsha ngokukhawuleza - emva koko ihambe.
Nantso into eyenzekayo kule mpelaveki. UCoyne ufake amanqaku ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ebusuku, kodwa ngeCawe, kwabonakala ngathi kuphelile ukukhanya.
Emva koko, ngobusuku bangoLwesithathu, yaphinda yavela, ngeli xesha yaqaqamba ngakumbi kunobusuku obudlulileyo.
Iyamangalisa indlela iimeko ezinokutshintsha ngokukhawuleza ngayo, utshilo uCoyne. Ngobunye ubusuku bukhona, obulandelayo, buhambile. Kwaye ke, ibuyile kwakhona.
Kukho iindawo ezimbalwa ezaziwa ngeziganeko zazo ze-bioluminescence kuluhlu lweebhakethi zikaCoyne, kuquka indawo ebizwa ngokuba yiJervis Bay e-Australia kunye nenye ePuerto Rico.
Ifoto kunye nevidiyo ibisoloko inomdla kum, xa udibanisa into epholileyo njenge-bioluminescence, iyalutha, utshilo. Ndiyakholelwa ukuba ndiza kukwenza oku ubomi bam bonke.